သတင်းရေးသူကို The Voice ဖော်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်
အင်္ဂါ, ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > သတင်းရေးသူကို The Voice ဖော်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်
သတင်းရေးသူကို The Voice ဖော်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်	မျိုးသန့်	| သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၂ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနအချို့၌ ငွေကြေး အလွဲသုံးစား ပြုမှုများ ရှိနေသည်ဟု The Voice ဂျာနယ်ပါ သတင်း ရေးသားသူကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက သောကြာနေ့ တရားရုံးချိန်းတွင် ထပ်မံ လျှောက်ထားသော်လည်း ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်က ဦးကျော်မင်းဆွေက ဖေါ်ထုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောသည်။“ဒီကိစ္စက ရှင်းနေတာပဲဗျ။ သတင်းထောက်နာမည်က ဖေါ်စရာကို အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒီကိစ္စမှာ အဓိက တာဝန်ရှိသူက သတင်းထောက် မဟုတ်ဘူး။ အဓိက က အယ်ဒီတာချုပ်ရယ်၊ ထုတ်ဝေသူရယ်ပဲ။ အယ်ဒီတာက ထည့်ပါဆိုမှ ဒီသတင်းက ပါမှာ။ ဒါဟာ ကျင့်ဝတ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဘက်က လုံးဝ ဖေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးကျော်မင်းဆွေ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ကလည်း သတင်းထောက်အား ဖော်ထုတ်ပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနက တရားရုံးတွင် လျှောက်ထားခဲ့ရာ The Voice ဘက်မှ ထုတ်ဖေါ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည် လျှောက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် သတင်းထောက် အား ဖေါ်ထုတ်ပေးရန်မှာ အယ်ဒီတာချုပ်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ထပ်မံ လျှောက်ထားလာခြင်း ဖြစ်သည်။၁၉၃၅ ခုနှစ်အတွင်းက အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိလာသည့် “ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ” ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ ထိုဆောင်းပါး ရေးသားသူကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသော်လည်း တရာရုံးမှ သတင်းရေးသားသူကိုဖေါ်ထုတ်ရန် မသင့်ဟု ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ခြင်းကို ကိုးကား၍ ဧပြီ ၉ ရက်နေ့က လျှောက်ထားခဲ့ပြီးဟုလည်း ဂျာနယ်၏ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးဝင်းရွှေက ပြောသည်။“ဒါကတော့ စီရင်ထုံးတွေလည်း ရှိပြီးသားပဲ။ သတင်းရေးသူကို ဖေါ်ထုတ်ခွင့် မရှိဘူး” ဟု ဦးဝင်းရွှေက ပြောသည်။တရားရုံးမှ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ကို ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်ပြီး ထိုနေ့တွင် သတင်းရေးသားသူကို ဖေါ်ထုတ်ရန် အမိန့်ချမည် ဆိုပါကလည်း “သတင်းရေးသားသူကို ဖေါ်ထုတ်ပေးဖို့ အမိန့်ချမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဘက်က အဲဒီအမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီ့ထက် အဆင့်မြင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာရုံးကို တက်မှာပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် သောကြာနေ့ ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင် The Voice ဂျာနယ်မှ ထုတ်ဝေသူဒေါ်ခင်ကြွယ်ဦး၊ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေနှင့် ရှေ့နေ ဦးဝင်းရွှေတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဇော်ကိုကိုတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ပိုင်ဆိုင်သည့် မုံရွာကြေးနီ စီမံကိန်း၏ အစုရှယ်ယာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်သို့ ရောင်းချခဲ့ရာ ငွေပေးချေမှု၌ ဦးပိုင်လီမိတက်က ပေးချေရမည့်အစား နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတခုက ပေးချေသည်ဟု ရေးသားခဲ့ရာမှ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ တရားစွဲဆိုမှု ခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း မူလတန်းအထိသာ ပညာသင်နိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေ
စစ်တပ်နှင့် ရဲက သိမ်းထားသော မြေများအတွက် သမ္မတထံ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတင်ပြီး
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှအချက် ရှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ
ALD နှင့် RNDP ပေါင်း၍ “ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ” အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မည်
အိန္ဒိယမှ နှလုံးနှင့် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကုသပေးရန် စီစဉ်
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြေစာရရန် တစ်ဧက သုံးသောင်း ပေးနေရ
မလေးရှား ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ မြန်မာလုပ်သားများ မြန်မာအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆွေးနွေးထား
နေပြည်တော်တုိုင်းမ် အပတ်စဉ်ဂျာနယ် ရပ်နား	သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ ရှစ်လတာ တရားစွဲမှု ပြေလည်	မော်ချီး သတ္တုတွင်း ဆက်လက်မတိုးချဲ့ရန် ကရင်နီ မိုလိုကွန်ယက် တောင်းဆို	စွပ်စွဲခံရသူ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင် မပါဘဲ အမှုစစ်ဆေးရန် တရားရုံး လက်ခံ	စက်သုံးဆီ တန်ချိန် ၃၈,ဝဝဝ ကျော် တင်သွင်းရန် စီစဉ်နေ	ဘိလပ်မြေ တန်ချိန် ၁၁၀,၀၀၀ ကျော် တင်သွင်းမှုရှိခဲ့	Messenger နှင့် ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်များကို NLD ဦးဉာဏ်ဝင်း တရားစွဲဆို	Who is Online
We have 172 guests and 1 member online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved